Tonga Any Etazonia Ny Sary Sokitra Tahaka Ny Tena Izy Vita Amin’ny Taratasy Ataon’ilay Artista Japoney · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Oktobra 2016 4:15 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, bahasa Indonesia, Español, Italiano, English
Pikantsary avy amin'ny lahatsary fampahafantarana ny “Fanamboarana Taratasy” an'i Chie Hitotsuyama / aPR Creative Marketing Management fantsona YouTube .
“Angamba mety ho maneho ny tenantsika sy ny fiainantsika, amin'ny ambaratonga maro ny biby sary sokitra nataoko avy amin'ny fanangonana gazety,” hoy Chie Hitotsuyama . Niainga hanao ‘ny fitetezan-tany voalohany ho any Etazonia ilay mpanakanto Japoney, manao fampirantiana efatra miaraka miseho any amin'ny faritra samihafa ao amin'ny firenena hatramin'ny Janoary 2017. Mpanakanto karamain'ny MOAH:CEDAR ao Lancaster ihany koa izy, ao California mandritra izany fotoana izany.
Namorona objets d'art tamin'ny alàlan'ny fampiasana ny teknikan'ny taratasy voatsakotsako i Hitotsuyama. Ny biby no lohahevitra fampiasany, arymanana endrika tahaka ny tena izy ny famoronany amin'ny alàlan'ny taratasy , ary matetika mameno efitrano iray manontolo.
Rehefa voahorona ny taratasy iray, hoy Hitotsuyama , dia mitombo ny hamafiny, ary araikitra tsirairay amin'ny lafiny avy dia afaka mamorona fiolika sy bika amin'ny alalan'ny singa tsirairay.
Tao anatin'ny fanambarana ara-javakanto iray navoaka JAI & JAI, toerana fanaovana fampirantiana ao Los Angeles, nanazava ny fomba fanaovana ny asakanto amin'ny alàlan'ny taratasy i Hitosuyama :
Mivoaka isan'andro ny gazety ary ariana isan'andro avy eo. Mamerina fahaterahana indray sy fahafatesana izany herina izany sady mitondra fahatsiarovana ho antsika. Tsapako fa tena mitovy amin'ny olona izay mamerina ihany koa ny tantara sy ny zavatra niainany manokana izany, ny tsingeringerin'ny fiainana sy ny fahafatesana.
Efa nahazo fankasitrahana noho ny asakanto i Hitosuyama tao Japana, izay monina ao Shizuoka, akaikin'ny Tendrombohitra Fuji talohan'ny fampirantiana ao Etazonia izay ataony amin'izao fotoana izao .
Vita avy amin'ny gazety ny famoronana rehetra. Ireto misy fantina avy amin'ny tsangan'asan'i Hitotsuyama .
Avy any amin'ny faritra manana fifandraisana ela tamin'ny fanamboarana taratasy ao Japana i Hitosuyama :
Tao amin'ny Foaran'ny Taratasy ao an-Tendrombohitra Fuji [fanamarihana: maro ny orinasa fanamboarana taratasy any amin'ny faritra avaratra atsinanan'i Shizuoka, teo am-pototry ny Tendrombohitra Fuji], no nanao fampirantiana famoronana vita amin'ny taratasy i Chie Hitotsuyama mpanakanto tao an-toerana.
Mifanakaiky amin'ny tena izy ny famoronany izay toa mampiseho ny fanahin'ny biby ampiasainy ho lohahevitra.
Ato amin'ny fampirantiana manokan'i Hitotsuyama aho (o ^^ o)
Vita avy amin'ny gazety ny zava-drehetra. Tena tiako ity mpanakanto ity.
Ho hita indray miaraka any Los Angeles, Chicago, Lancaster ary Miami hatramin'ny Janoary 2017 ny fampirantiana ny zavakanton'i Hitotsuyama.
Jereo ny pejy Facebook-n'ny Studio Hitotsuyama raha mila fanazavana fanampiny. Hita ao amin'ity lahatsari-paritra hanaovany ny fitetezan-tany an'i Amerika ity ny santionany maro amin'ny asakanton'i Hitotsuyama vita amin'ny taratasy voatsakotsako :
Ary ao jerena ihany koa ao amin'ny tranonkalan’ilay mpanakanto :
Pikantsary avy amin'ny tranonkalan'i Chie Hitotsuyama.